Al Shabaab Oo sheegatay Mas'uuliyadda Qaraxyo ka dhacday duleedyada Balcad iyo Wanlaweyn.
Ciidamada Australia oo Khamri ku cabay Addimaha Muslimiin ay xasuuqeen [Warbixin].
Qarax ruxay magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya.
Weeraro khasaara dhaliyay oo ka dhacay Gaalkacyo iyo Afgooye.
Cudurka Carona oo shalay dadkii ugu badnaa ku laayay dalka Mareykanka.
Booliska Itoobiya oo xiray mid kamida Hoggaamiyaasha Muslimiinta ee caanka ah.
Saturday October 12, 2019 - 16:39:20 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar faah faahsan ayaa kasoo baxaya qaraxyo khasaara badan dhaliyay oo saacadihii lasoo dhaafay ciidamo katirsan dowladda Federaalka Soomaaliya lagula beegsaday gobollada shabeellooyinka.
sawir hore qarax Muqdisho ka dhacay
Wararka ka imaanaya duleedka degmada Wanlaweyn ayaa sheegaya in ugu yaraan 4 askari ay dhinteen 10 kalane ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii qarax xooggan lala helay gaari nuuca dagaalka ah oo ay wateen ciidamo ka yimid dhanka Balidoogle.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in gaari Tiknika ah oo ciidamadu wateen uu gubtay iyadoona waxyeello gaartay gaari kale, ciidamadan weerarku ku qabsaday deegaanka Warmaxan ayaa ah kuwii uu Mareykanku ku tababaray garoonka diyaaradaha Balidoogle.
Dhinaca kale wararka ka imaanaya duleedka degmada Balcad ee Sh/dhexe ayaa qarax khasaara dhaliyay halkaas lagula beegsaday ciidamo katirsan kuwa maamulka Hirshabelle.
Qaraxa oo ka dhashay miino dhulka lagu aasay ayaa lagu burburiyay gaari Cabdi Bile ah waxayna dhaawacyo garaab ah gaareen Afar askari oo gaariga la socday, dhammaan qaraxyadan khasaaraha lagu gaarsiiyay ciidamada dowladda waxaa mas'uuliyadooda sheegatay Xarakada SHM.
Al Shabaab oo sheegay in 53 Askari ay ku dileen dagaalkii Bacaad weyn [Warbixin].
Taliban oo sheegatay Mas'uuliyadda weerar 30 Askari lagu dilay.
Ciidamada Al Shabaab oo dagaal culus kula wareegay deegaanka Bacaadweyn ee gobolka Mudug.
Al Shabaab oo sheegatay mas'uuliyadda qarax ka dhacay meel ku dhow garoonka Muqdisho.
Al Shabaab oo weeraray 7 saldhig oo ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin Soomaaliya.
Qaraxyo 12 Askari lagu dilay oo ka dhacay meel ku dhow garoonka Balidoogle.
Toogasho khasaare dhalisay oo ka dhacday gobolka California.
Al Shabaab oo sheegtay Mas'uuliyadda weerar naf hurnimo oo lagu beegsaday xarunta Iskoola Boliiziyo.
Al Shabaab oo beenisay war kasoo baxay Itoobiya.
Askar ku dhaawacmay qaraxyo ka dhacay magaalada Jowhar.
Sawirro: Dibadbax lagu difaacayay Nabiga SCW oo ka dhacday degmada Ceelbuur.
09/11/2020 - 20:41:23
Sawirro; Degmada Galhareeri Iyo Difaaca Nabigeena Muxamed صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.
08/11/2020 - 13:25:51
Sawirro: Askari American ah oo ku dhintay Weerar istish-haadi ah oo ka dhacay deegaanka Gandershe.
06/11/2020 - 16:40:25
Sawirro+Codad: Degmada Jilib oo aan loo kala harin dibad baxyada lagu difaacayo Nabiga SCW.
03/11/2020 - 13:13:33
Sawirro: Masjid Weyn Oo Laga Dhisay Deegaanka Buurdhuxulle
28/10/2020 - 21:28:35